छोरीले हुन्न र ? – Bal Sarokar
छोरीले हुन्न र ?
फाल्गुन २३, २०७३- भक्तपुर १५, इताछेंकी ३३ वर्षीया रजिता (नाम परिवर्तन) का १० र ७ वर्षका दुई छोरी छन् । एक–एक छोराछोरीको इच्छा बोकेका रजिता दम्पतीले सोचेअनुरूप भएन । पहिलो सन्तान छोरी हुँदासम्म उनको परिवारमा हाँसो, खुसी थियो । दोस्रो सन्तानको रूपमा पनि छोरीकै आगमन भएपछि खिन्नता सुरु भयो । परिवार तथा छिमेकीले पनि ‘छोरी नै पो ?’ भन्न थाले ।
श्रीमान् तथा घरपरिवारले पनि ‘वंश जोगाउन त छोरा नै चाहिन्छ’ भन्न थालेपछि तेस्रो सन्तान जन्माउने सहमति भएको उनले सुनाइन् । तेस्रो गर्भ रह्यो । गर्भ बसेको केही सातामा छोरा रहे राख्ने, छोरी भए गर्भपतन गराउने सहमतिमा भू्रणको लिंग परीक्षण गराइयो । लिंग परीक्षण गर्दा छोरी भएको पाइएकाले गर्भपतन गर्न बाध्य भएको उनले स्विकारिन् । वैधानिकताप्राप्त गर्भपतन केन्द्रकै चिकित्सकको सल्लाहमा भू्रण परीक्षण गराएर गर्भपतन गराएको उनले बताइन् । हालसम्म परिवारको सहमतिमा तेस्रो पल्ट भ्रूणहत्या गराएको र अझै पनि परिवारले कुल तथा वंश जोगाउन छोरा जन्माउनैपर्ने दबाब दिँदै आएको उनको गुनासो छ ।
पैसाको लोभमा वैधानिकता पाएकै चिकित्सकले भ्रूणको पहिचान गरी गर्भपतन गराउने जस्ता अवैधानिक कार्य गराउँदै आएको पाइएको छ । ‘बाध्य भएरै तेस्रो गर्भको भ्रूण हत्या गर्नुपरेको हो,’ रजिताले दुखेसो पोखिन्, ‘छोरा जन्माउने कुरामा श्रीमान्, घरपरिवारकै दबाब बढी भयो ।’
रजिताको जस्तै सूर्यविनायक, कटुञ्जेकी सारिका (नाम परिवर्तन) का ५ र ३ वर्षका छोरीहरू छन् । पहिलो र दोस्रो सन्तान छोरी भएपछि ३ वर्षपछि तेस्रो सन्तानका रूपमा छोरै जन्माउने सहमतिमा गर्भ बस्यो । तर, परीक्षण गराउँदा छोरी रहेको पाइएपछि परिवारको दबाबमा गर्भपतन गराएको उनले बताइन् ।
गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग छोरो वा छोरी भनेर पहिचान गराउन पाइँदैन । भू्रणको लिंग परीक्षण कानुनद्वारा निषेधित छ । ‘गर्भमा रहेको बच्चा र आमाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन भिडियो एक्स–रे (अल्ट्रासाउन्ड) गराउन पाइन्छ,’ महिला कानुन तथा विकास मञ्चकी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, ‘तर, अल्ट्रासाउन्ड गरेर भ्रूणको लिंग छोरा वा छोरी पहिचान गर्न भने पाइँदैन । यस्तो कार्य भएको छ भने अपराध हो ।’
दुर्गम भेगका भन्दा सुगम, सहरी र शिक्षित क्षेत्रकै परिवारले भ्रूण हत्यालाई सामान्य रूपमा लिँदै आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ‘पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्नेको संख्या विकराल बन्दै गएको छ,’ डा. इवामुरा मेमोरियल अस्पतालकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. शोभा मारिखु श्रेष्ठले भनिन्, ‘पढेलेखेकै व्यक्तिहरूले छोरा जन्माउन छोरीको हत्या गरिरहेका छन् ।’
कतिपय दम्पती बाहिर क्लिनिकमा भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउन अस्पताल आउने गरेको उनले बताइन् । लिंग पहिचान गराउनु नै अपराध भएको र लगातारको गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्यमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा असर गर्ने बताउँदा पनि उल्टै जति पनि पैसा तिर्ने भन्दै गर्भपतन गराउन लालायित हुने उनले सुनाइन् । कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रमै कार्यरतले समेत लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गराएको समेत भेटिएको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कतिपय महिलाले बाहिरी क्लिनिकमा भ्रूणको लिंग पहिचान गरी औषधि पसलमा गर्भपतन गराउने औषधि खरिद गरेर सेवन गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । ‘बाहिरी पसलमा खरिद गरेको औषधि सेवनपछि सामान्य ब्लिडिङ भएपछि गर्भपतन भएको बुझेर बस्छन् । पछि गर्भमा बच्चा चल्न थालेपछि ५/६ महिनाको गर्भपतन गराउन समेत आउने गरेका छन्,’ डा. श्रेष्ठले भनिन् ।
सम्पन्न, शिक्षित र सहरी दम्पतीले नै बढी लिंग पहिचान गरी छोरीको भ्रूण हत्या गराउने गरेको अधिवक्ता ढुंगानाले बताइन् । परिवारकै सहमतिमा पहिचानपछि गर्भपतन गराउने भएकाले पनि उजुरी नपर्ने र कानुनी दायराभन्दा बाहिर यस्ता आपराधिक घटना घट्ने क्रम बढेको उनले बताइन् । ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित, निम्न आयस्रोत भएका र पिछडिएका वर्गका महिला बढी पिल्सिने र कानुनी दायरामा पर्ने गरेको उनले बताइन् । यसरी लिंग पहिचान गरेका आधारमा कानुनी दायरामा आउने घटना भने अति कम पाइएको छ ।
छोरा जन्माउनुपर्ने दबाबका कारण कतिपय महिला शारीरिक तथा मानसिक रोगको सिकार भएका उदाहरणसमेत प्रशस्त छन् । वीरेन्द्रनगरकी ४० वर्षीया राधा (नाम परिर्वतन) ले दुई छोरी जन्माइन् । छोरा जन्माउन परिवार र श्रीमान्ले बारम्बार दबाब दिन थाले । ‘छोरा जन्माएर देखा’ भन्दै दिइने तीव्र दबाबका कारण उनी मानसिक रूपमा विचलित हुन पुगिन् । उनी हप्तौंसम्म अस्पताल बसेर मानसिक औषधि सेवन गर्न बाध्य भइन् । उमेर ४० कटिसक्दा समेत छोरा जन्माउन दबाब आएको र घरबाहिर कोठा लिएर बस्न बाध्य रहेको उनले बताइन् ।
पछिल्लो समय छोरा–छोरीमा भेदभाव छैन । कुल/वंशजका नाममा छोरा जन्माउनैपर्छ भन्ने मान्यता भने नघटेको भक्तपुरका पूर्णबहादुर सुवालको अनुभूति छ । सुवाल दम्पतीले छोराको पखाइमा ५ छोरीलाई जन्म दिए । ‘छोरा जन्माउने आसमा छोरी जन्मिरहे, तर भ्रूण हत्या गरेनौं,’ सुवालले भने, ‘लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्नु पाप र अपराध हो । समाजका लागि पनि छोरा जन्माउनुपर्ने बाध्यता भयो । छोराले गर्ने त केही होइन तर हाम्रो समाजले छोरी मात्र हुने परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ ।’ उनीहरूको छोरा जन्मिएको छ ।
कतिपयको मान्यता भने फरक छ । छोरा जन्माउन बिस्केट जात्रामा उभ्याइएको अष्टमातृका सहितको ५५ हाते लिंगोको टुप्पोमा बाँधेको फूल तथा प्रसाद टिप्ने मान्यता अझै रहेको सुवालले बताए । हजारौंको भीडबाट डोरीमा झुन्डिएर ज्यानको बाजी राखी लिंगोमा बाँधेको फूल टिपेर ल्याउँदा छोरा जन्मिन्छ भन्ने प्रचलन छ । त्यस्तै, सेतो मच्छिन्द्रनाथको लिंगोमाथि चढाएको नरिवल पुजारीले भुइँमा खसाल्दा समाएर पुन: मच्छिन्द्रनाथलाई चढाउन सके पनि छोरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको उनले सुनाए ।
हिन्दु परम्पराअनुसार मृत्युपछि छोराले काजकिरिया गर्ने र कुल/वंशज धान्ने मान्यताका कारण छोरा जन्माउने होड कम नभएको धेरैको धारणा छ । कतिपय व्यक्तिले छोरा जन्माउनुलाई भाग्यसँग पनि तुलना गर्ने र हेराउन आउने गरेको ज्योतिषी रत्न न्हेमरूले बताइन् । वर्षमा डेढ सयभन्दा बढीले छोरा हुन्छ कि हुँदैन भन्दै हात हेराउने गरेको उनले बताइन् ।
मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महल (२८) ‘ग’ मा गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग पहिचान मात्र गराउनेलाई पनि तीनदेखि छ महिनासम्म कैद र पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले जानकारी दिइन् । परिवार र श्रीमानको सल्लाहबाट गर्भपतन गराउने भएकाले यसविरुद्ध कसैले उजुरी नहाल्ने तर गर्भपतनपछि विभिन्न शारीरिक समस्या आउँदा समेत महिला पिल्सिरहने प्रवृत्ति कायमै रहेको उनको कथन छ ।
महिलाको स्वनिर्णयमा १२ साता सम्मको गर्भपतन गराउन सकिने, गर्भ हाडनाता वा बलात्कारबाट रहन गएको प्रमाणित भए अभिभावकको मन्जुरीमा गर्भपतन गराउन सकिने, आमा तथा बच्चामा कुनै जोखिम देखिएमा सम्बन्धित चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम मात्र गर्भपतन गराउन सकिने प्रावधान छ । यसबाहेक भ्रूणको लिंग पहिचान भने गर्न पाइँदैन ।
प्रकाशित: फाल्गुन २३, २०७३ (अनलाईन खबर)